MIVAVAHA KA AZA MITSAHATRA !
MIVAVAHA KA AZA MITSAHATRA ! - Rasamindrakotroka Andry Tiana
Mivavaha ka aza mitsahatra,
Eo amin’ny androm-piainanao ;
Ka ny tsara foana alahatra,
Izay no adidy miandry anao.
Maraina, antoandro sy hariva.
Ny fiainanao ho sambatra,
Na mbola ho ela, na efa hadiva.
Satria be ny te handavo anao ;
Na akaiky io na mety ho lavitra,
Na eo ivoho na eo anoloanao.
Fa tsy ela intsony dia ho tonga,
Ilay fotoana izay nalahatra ;
Tsy angano io na koa somonga.
Averimberina eto foana.
Satria satana lava sabatra,
Handiso anao amin’ny fotoana.
Dia ho mpandresy ianao.
Fa ho avy ny fialan-tsasatra,
Satria ny tanjona rahatrizay,
Dia ny handova sy ho sambatra,
Sokajy : Fampaherezana, fiainana, Vavaka